Rio Taglio, kwabo bathanda ibhayisekile - I-Airbnb
Rio Taglio, kwabo bathanda ibhayisekile
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMichela
IRio Taglio yindawo entle elungiswe ngokupheleleyo.
Iqukethe igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi elinye lokulala elinokuthi longeze ibhedi yesibini, indawo yokuhlala enekhitshi enezixhobo, isofa kunye nekhabhathi, igumbi lokuhlambela elineshawa, i-terrace. Kukho ithuba lokuhlamba impahla kunye nokuxhoma zombini kwi-terrace nakwigadi eqhelekileyo kwindawo ezinikeleyo.
Igaraji evaliweyo, eyenziwe ngamatye iyafumaneka ukugcina ngokukhuselekileyo iibhayisekile kunye nezithuthuthu.
Indlu ukwakweli Alpe ngumoya eAdriya, umjikelo umendo, kwindawo qhinga ukufikelela yonke imiyalelo, kuba eneneni imizuzu 7 ukusuka Palmanova uphume, imizuzu eli-15 ukusuka Grado, imizuzu emi-5 ukusuka Aquileia lemizuzu eli-10 kuphela Fvg moya..
4.91 · Izimvo eziyi-44
Ummandla ukhonzwa kakuhle: ilitye (kodwa ngenene ezimbini!) Kukho iivenkile ezinkulu ezi-2 (i-interspar kunye ne-Lidl), indawo yokutyela egqwesileyo, i-pizzeria, i-ice cream parlor, ibha, i-launderette.
Umbuki zindwendwe ngu- Michela